Allgedo.com » 2012 » July » 09
Home » Archive Daily July 9th, 2012 Farriin u baahan in lagu hubsado Odayaal Dhaqmeedyada Soomaaliyeed – By Bashir Mohamud. Jul 9, 2012 Annagu muraadkayagu waxuu yahay in aan hubsanno in Odayaal Dhaqmeedyadu farriintaan aay mid mid u gaarto inta aaysan Go’aan ka gaarin ansixinta Dastuurka horyaalla.
“Dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee khilaafka soohdimaha... Saraakiisha Al-shabaab ee Kismaayo oo odayaasha beesha Talxe ee Kismaayo amar ku siiyay in ay 45 casho gudahood Ugaas kusoo doortaan. Jul 9, 2012 Kismayo, Somalia (AOL) – Kulan saraakiisha Al-shabaab ee beesha Talxe la qaateen odayaasha Talxe ee Kismaayo ayeey ku amareen in ay sida ugu dhaqsiyo badan muddo 45 cisho gudahood kusoo doortaan ugaas maadaama sida ay sheegeen uu ridoobay ugaaskii beesha Talxe Ugaas Cabdi Buule Ugaas Xasan Dabac oo haatan ka mid ah odayaasha jooga Muqdisho.
Kulanka ayaa waxaa soo qaban qaabiyay saraakiisha... Sheekh Cali Dheere “Dastuur ku sheegga ay Gaalada iyo Dabadhilif-yadeedu wadaan waa mid lagu simayo Muslimka iyo Masiixiga!” Jul 9, 2012 Marka, Somalia (AOL) – Afhayeenka Xarakada Al-shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage (Sheekh Cali Dheere) ayaa shir jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Marka ku sheegay in Soomaaliya ay ka socoto qorshe lagu simayo Diimaha Muslimka iyo Masiixiga, waxaanna uu Shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay si wadar ah oga hortagaan masiibadaas ku soo fool leh.
“Gaaladu hadafkeeda way caddeysatay... Boqor Buur-madoow oo hal sano oo xarig ah lagu xukumay. Jul 9, 2012 Hargeysa, Somalia (AOL) – Mid ka mid ah madax-dhaqameedyada reer Somaliland oo ay Madaxweyne Siilaanyo isku hayb yihiin kaasoo lagu magacaabo Boqor Cismaan oow Maxamuud (Buur-madoow) ayay maxkamad ku taallo magaalada Hargeysa ku xukuntay halsano oo xarig ah, kadib markii lagu soo eedayay in uu aflagaaddo u gaystay madaxda maamulka Soomali-land.
Boqor buur-madoow ayaa muddo haatan laga jooga dhawr... Gaanshaanle Sare Maxamed Muuse Jeneqoow oo galabta lagu dilay Dharkeenleey. Jul 9, 2012 Rag ku hubeysan Bistoolado ayaa galabta degmada Dharkeenleey waxay ku dileen Gaanshaale Sare Maxamed Muuse Jeneqoow oo ka mid ahaa saraakiisha dowladda TFG .
Dilka ayaa la shegay inay geesteen Laba nin oo la sheegay... Madaxweyne shariif oo Prof Cabdulaahi Axmed Afrax u magacaabay gudoomiyaha bankiga hormarinta Soomaaliyeed. (WAREEGTO) Jul 9, 2012 Xeer Madaxweynaha J.S LR. 236 taariikh 07/7/2012
Markuu arkay;... Gudoomiyaha degmada Hilwaa oo ka badbaaday weerar lagu qaarajin lahaa. Jul 9, 2012 Gudoomiyaha degmada Hilwaa Cumar C/lle Jacfaan ayaa ka badbaaday fal la doonaayay in habeenkii xalay ahaa lagu qaarajiyo xilli uu ku sugnaa hoyga uu ka deganyahay degmadaasi.
3 qof ayaa halkaasi... Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo si heer sare ah loogu soo dhoweeyey Muqdisho Jul 9, 2012 Muqdisho, July, 09, 2012——Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay ka dib shir uu uga qeyb galay dalka Talyaaniga kaa oo ay soo qaban qaabisay International Contact Group (ICG) oo lagaga hadlayay Arrimaha Soomaaliya gaar ahaan Arrimaha Roadmap-ka iyo Sidii looga bixi lahaa KMG.
Ra’iisul Wasaaraha iyo wafdigii la socday ayaa si... Radio Allgedo/ Waraysiyo